-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ တတိယအကြိမ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး ၃/၂၀၂၁ ကို ယနေ့နေ့လည်… – PVTV Myanmar
·9months ago ·37 Comments
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ တတိယအကြိမ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး ၃/၂၀၂၁ ကို ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်း
-ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)၏ ၂၀-၄-၂၀၂၁ ရက်တွင်ကျင်းပသော အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ပါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးကို ဖြင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်း
-မြန်မာ့အရေး အာဆီယံအစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ချက် (မူကြမ်း) မှာ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ရေး” ကို ဘုံသဘောတူညီချက် တစ်ရပ်အဖြစ် မူလက ထည့်သွင်းထားပေမယ့် တရားဝင် အစည်းအဝေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာ ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း အစရှိတဲ့ သတင်းတွေအပါအဝင် PVTV ရဲ့ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ သတင်းအစီအစဉ် ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Like – 5.5K Share – 672
2021-04-26 at 8:07 PM
တို့ပြည်သူတွေ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ မအလကို အမြန်ဆုံး တိုက်ထုတ်ရမယ်
Salai K Tun Oo says:
2021-04-26 at 8:09 PM
ပြည်ပ ကို အားကို ရင် အချိန်တွေ အလဟသ မ ဖြစ်စေချင်
မြေပြင်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်နေ ပြည်ပမသိ
ထို့ ကြောင့် လက်တွေ့ လုပ် ရတော့မည်
ပြည်ပ အားကို အချိန်တွေ ကုန် ရှိမည်
လုပ်စရာ ရှိသာ မြန်မြန် ဖြစ်စေ ချင်
ကြာလေ ပြည်သူ ဒုခ ရောက်လေ
UN A US မျှော်လေ ဒုခ ကြုံ လေ
လုပ်စရာ ရှိ ဖြတ် ဖြတ် မြန်မြန် ဖော်
2021-04-26 at 8:17 PM
ပြည်သူ့ အစိုးရ ဆိုတော့ နားဝင်ချိုလိုက်တာ 🥰🥰🥰
2021-04-26 at 8:19 PM
ဒီမိုဆိုတာ သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးကို တန်ဖိုးထားတဲ့ စနစ်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်း လူတိုင်းလူတိုင်း လိုက်နာနိင်ရင် ဘဝဆိုတဲ့ ဘဝတွေ ပြီးဆုံးသွားပြီ
2021-04-26 at 8:32 PM
မင်္ဂလာညချမ်းပါ PVTV PVTVအဖွဲ့သားများအားလုံး ​ဘေးရန်ကင်းကာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် လိုရာပန်းတိုင်ကို
Zaw Phyo Win says:
KhunNaung TaNaung says:
ပြည်ပသိပ်အားကိုးမနေပါနဲ့ ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်ဖေါ်ဆောင်ပါ ကြာလျှင်ပြည်သူသွေးအေးသွားလိမ့်မည်
Zawwin Htun says:
2021-04-26 at 8:50 PM
2021-04-26 at 8:52 PM
Angle Snow says:
2021-04-26 at 8:53 PM
2021-04-26 at 8:59 PM
Yūăń Xĭñğ says:
2021-04-26 at 9:02 PM
အမြစ်ကနေနုတ်ယူပြီး တိုက်ခိုက်ယူရတော့မှာပေါ့အခုတော့လဲ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
2021-04-26 at 9:04 PM
Be safe and successful all NUG members. We fully support NUG.
2021-04-26 at 9:08 PM
Kyaw Kyar says:
မရွိတဲ့ ေသာက္ရွက္ ကြဲပျီေပါ့ အာစီယံ…
Thandar Aye says:
Swe Swe Nyunt says:
2021-04-26 at 9:33 PM
We fully support NUG. အမြန်တကာ့အမြန်ဆုံး ခြေဦးမှုရအောင် အစစ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ် ပြည်တွင်းက စွမ်းအားရှိသလောက်တောင့်ခံနေပါတယ် #အရေးတော်ပုံမုချအောင်ရမည်
ခွန်းနွေ ဦး says:
2021-04-26 at 9:52 PM
2021-04-26 at 10:02 PM
မ.အ.လ ကအာဆီယံမလိုတော့ဖူး အေးချမ်းမှလာခဲ့ဆိုပဲ သူရှိမှတော့မအေးချမ်းဖူးလေ ဒီတော့ရှင်းပါတယ် မြန်မအရေး အာဆီယံ မလိုတော့ပါဖူး
Zin Lin Naing says:
သတင်းကြေညာပုံလေသံလေးတော့ ဟိုမအေလိုးတွေမတူအောင် ပြောင်းပေးပါဦးလား
2021-04-26 at 10:23 PM
Myanmar Spring Revolution Supporters – S’Korea 📜 အဖွဲ့မှသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရကို ကြိုဆိုထောက်ခံပါသည် 💯
2021-04-26 at 10:49 PM
2021-04-26 at 11:00 PM
ကျန်းမာစွာဖြင့် နိုင်ငံအရေး ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။
2021-04-26 at 11:18 PM
La Yaung Cho says:
कवि धज says:
2021-04-27 at 12:00 AM
သတင်းတင်ဆက်မှုလုပ်တာ ကောင်းမွန်ပါတယ်…ပြည့်စုံဖို့ ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံ့အနှံ့ဖြစ်ပျက်နေတာများကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်…
2021-04-27 at 4:46 AM
2021-04-27 at 9:39 AM
2021-04-27 at 10:01 AM
ပြည်သူ့ အစိုးရ NUG ဘေးကင်းပါစေ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် 😍
Khin Htay Htay Oo says:
2021-04-28 at 2:30 PM